Uma uphethe has ibalazwe Poland, singayeka kalula ukubona ukuthi wonke enyakatho yezwe emngceleni woLwandle iBaltic. Ngakho, ubude ugu isimo European ingamakhilomitha angu abangaphezu kwamakhulu amahlanu. Kuyinto igcwele amabhishi acwebile, imifula kanye namachibi, amagquma. Ngaphezu kwalokho, it has wonke nengqalasizinda edingekayo ukuze yokuchitha isizungu okukhulu. Ngakho, ulwandle ukuvakasha ePoland kungaba inketho kakhulu kuze kube iholidi ngaphambi. On lokho zokungcebeleka nokuzijabulisa ingatholakala lapha, futhi sizobe ukukhuluma okwengeziwe.
Poland (Baltic Sea) - Amaholide: uhlu zokungcebeleka
Ingxenye ugu yezwe igcwele amadorobha amanengi amancani, ukunikela izivakashi iholidi ongenakulibaleka. ingqalasizinda Ihhotela at zokungcebeleka wendawo uvezwa njengoMahluleli brand izakhiwo ezintsha yesimanje nehhotela lalungiswa, ezakhiwe amashumi eminyaka edlule. Kule ndaba, ungakwazi sithathe uzakhela indlu ngokuhambisana izintandokazi zakho namakhono zezimali. Ezokungcebeleka of Poland Sea abavakashela nje iholidi beach, kodwa futhi ezihlukahlukene zokuzijabulisa kanye uhambo ohlelweni. Phela, ngaphezu ingqalasizinda evuthiwe, lapha kukhona eziningi ezikhangayo zomlando namasiko.
Ngakho, uma uhlela iholidi olwandle Poland, khumbula ukuthi zokungcebeleka ethandwa kakhulu kuleli zwe zimi kanje: Krynica Morska, Loeb, Kolobrzeg, Swinoujscie, Miedzyzdroje eSopot nabanye. Sinikeza ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana ayinhloko.
Ingcebo enkulu yokuqothulwa kwehlathi lase-Polish ngasolwandle resort kuyinto ngokwemvelo. Inesibonakude amabhishi omangalisayo sandy, amahlathi olunothile izimbali ocebile ezilwaneni nasezimileni. Ngaphezu kwalokho, emzini Krynica Morska kukhona zonke izimo ngoba ukhululekile surfing nokudoba abalandeli. Ngaphezu kwalokho, imithombo eminingana yamanzi amaminerali okwelapha kubekwe phakathi resort. Naphezu kweqiniso lokuthi Krynica Morska ingenye zokungcebeleka ethandwa kakhulu ePoland, akusoze kakhulu aminyene. Inani labantu bendawo kuphela eyodwa eziyinkulungwane nengxenye abantu.
Ukuzijabulisa okunikwa izivakashi resort of Krynica Morska
Phumula kule ndawo ngete kokubili abathandi beach futhi kwakudala abalandeli. Ngakho, lolwandle ingqalasizinda ku resort is kahle asethuthukile. Nokho, uma uhlela iholidi olwandle Poland, khumbula ukuthi isimo sezulu lapha ihlukile Ubusika ngokwanele efudumele nobumnene ehlobo cool. Nokho, izimo zezulu ukhululekile ngokwanele kuze kube iholidi ngaphambi lolwandle. Ngaphezu kwalokho, isimo kwemvelo edolobheni ngenxa ezihlanza umoya namanzi, kanye uphayini beech amahlathi, akunakwenzeka ukuba abashiye ubani nandaba. Elinye iqiniso elithakazelisayo ngale ubunjalo resort of Krynica Morska kuthathwa khona lapha kwezilwane eliyingqayizivele futhi izitshalo, okuyizinto cishe akunakwenzeka ukuthola kwezinye izingxenye iplanethi yethu. Ngokwesibonelo, lapho avame ukubonakala ogwini wonke umndeni ka izingulube zasendle ukuthi asesabi abantu. Nokho, ukukhuluma nabo ngokuseduze namanje hhayi Kunconywa: kungcono ukuthatha izithombe ezimbalwa kude.
Uma uya ulwandle Poland ke qiniseka ukuba siyicabangele njengoba inketho for omunye ethandwa kakhulu amadolobha resort sendawo okuthiwa Loeb. It iseningizimu ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi coast ngomlomo emfuleni efanayo. Lokhu resort kahle kakhulu abalandeli imisebenzi yangaphandle, ngoba kukhona zonke izimo ngenxa yokuqhuba ngebhayisikili, ihhashi ogibele futhi windsurfing. Ngaphezu kwalokho, Loeb liyithuluzi eliyinhloko for ekutadisheni Slowinski National Park.
Ingxenye elisogwini Leba ihlukaniswe ezindaweni ezintathu: emabhishi A, B no-C Bonke bangabangasokile ububanzi, anesihlabathi kuhlanzeke kakhulu. A beach endaweni evikelwe futhi ithandwa kakhulu kuleli dolobha. Kukhona ingqalasizinda evuthiwe: .. amathilomu, nemishayo, izindawo zokudla, izitolo, watercraft ngokuqashisa, izikebhe, njll With ebhishi is phambili A. lolwandle endaweni Nokho, it is hhayi evikelwe, nokuzijabulisa alikho ngempela. Kule ndaba, kuleli dolobha zezivakashi mbalwa bayokwazisa abantu abakhetha yokuchitha isizungu okuzolile nokunokuthula. Kepha ebhishi, kuba ibanganyana kusukela maphakathi Leba. insimu yalo ivikelwe. Lapho ungathola ezihlukahlukene zokuzijabulisa, kuhlanganise ebaleni lokudlala yezingane ne-volleyball, trampoline nokuningi.
Ezokuzijabulisa ezihehayo Leba
Ngaphezu amabhishi kakhulu, le ndawo kungaba ozibongayo khona eziningi ezikhangayo zemvelo yobuciko. Phakathi kwabo ivelele ibandla St Nicholas, ngubani kubhekwa ongumvikeli amatilosi lapha nabadobi. Yena yaziwa elondolozwe ku-ke icon UnguNina KaNkulunkulu, eyabhalwa German Maks Pehshtayn. Sihamba emigwaqweni edolobheni, ungabona isakhiwo mlando eyakhelwe ekuqaleni kwekhulu leminyaka eledlule, kepha efaniswe inqaba ephakathi. Itholakala emgwaqeni ngaphezu kogu lolwandle, futhi namuhla ehhotela "Neptune". Futhi ngasedolobheni kukhona inqolobane, ezazidume ngokutshala izindunduma zalo kanye nasezindaweni zokubhukuda.
Uma ucabangela iholide ngasolwandle ePoland, ngokuqinisekile kuyo kubangele indawo slozhnoproiznosimym igama - Miedzyzdroje. Lokhu edolobheni itholakala engxenyeni esentshonalanga ye ogwini isiPolish oLwandle iBaltic. It izivakashi eziningi lapha njengoba athuthukiswe kahle resort ingqalasizinda futhi ubuhle National Park futhi lamanzi esiphethu iziphethu nokwelashwa microclimate. By the way, izikhungo zezempilo zendawo ngempumelelo ukwelapha izifo elingenhla ipheshana zokuphefumula namaphaphu, kuhlanganise somoya.
Ukukhangwa eyinhloko Miedzyzdroje - Wolin National Park, okuyinto ingenye emakhoneni ambalwa ehlane engonakalisiwe. Sicela uqaphele ukuthi uhambo lapha ukuvakasha ingagadiwe Umhlahlandlela is hhayi Kunconywa, njengoba kukhona kungenzeka eliphezulu ukuhlangana nezilwane zasendle. Okunye ezikhangayo yemvelo yendawo kukhona post-glacial echibini futhi Nature Reserve, okuyinto eyayihlala zinyathi.
Lokhu edolobheni resort nge igama ezihlekisayo itholakala ogwini aseBaltic of Poland eduze komngcele waseJalimane. Inesibonakude inqwaba amahhotela yesimanje futhi amakhaya iholide. Nokho, nokuziqhenya kwakhe kwangempela epaki resort, eyasungulwa ngo ekuqaleni kwekhulu XIX. Ngaphezu kwalokho, sanatoriums nasemitholampilo Swinoujscie ngokukhethekile ekwelapheni izifo zemigudu yokuphefumula, senhliziyo iziyaluyalu umzimba.
Beaches Poland sisonke ogwini zendawo ngokukhethekile kakhulu ukuba yizivakashi. Phela, nabo basuke are banzi kakhulu. Abanaso amatshe amakhulu, kodwa isihlabathi elincane kuphela futhi nice.
Poland - iholide ngasolwandle: amanani
Kufanele kuqashelwe ukuthi abantu bakithi kukhona izivakashi njalo kuleli zwe, hhayi kuphela ngenxa yokuthi kukhona zonke izimo ngoba ziyinto ukhululekile, kodwa futhi ngenxa izindleko izaphulelo kunalokho yeningi. Ngaphandle kwalokho, uma uhlala eYurophu eyayiyingxenye yeRussia, umgwaqo izobiza ngempela ashibhe, futhi. Futhi uma unesifiso ukuchitha iholide yabo isitayela zikanokusho aphambili ehhotela, futhi kulesi simo, kufanele sibheke Polish ogwini aseBaltic. Phela, lapha zonke izivakashi kalula azitholele ezokungcebeleka ongakhetha kuye kokubili izintandokazi zabo futhi namandla ezezimali. Kepha sithola okufanele ngemali esiyikhokhayo, kuba the best in Poland. Ngokuvamile, ukwazi ukuqhubeka indlu ogwini kusuka 1000 kuya ku-30 000 ruble ngabunye ngaphandle nobunzima.
Ngakho, namuhla sezwa ukuthi kwenye yezindawo leyo iholide mkhulu Poland. Baltic Sea iholidi lapho ubhekwa ezingabizi kakhulu eYurophu, inikeza izivakashi ezihlukahlukene zokuzijabulisa: kusukela amabhishi omangalisayo futhi imithombo yamanzi amtoti ukuba hambo abajabulisayo izindawo zomlando uhamba ezindaweni agodliwe nemvelo eliyingqayizivele futhi sezulu.
Kuyini ezithakazelisayo Turan elisezansi. ezingwadule zayo, imifula kanye namachibi
Izikhangibavakashi kuya Czech Republic: Česky Krumlov
INtaba YeThempeli (eJerusalema): izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza isibalo kusuka ku-napkins? Izibalo ze-Volumetric ezivela kumaphongipi
Atom - siyingxenye indivisible kwendaba
Izikhwama "Avon": ukubuyekezwa, amamodeli kanye nencazelo
Ingane akusho ukulala ebusuku: izimbangela
Grooving bezihlahla zokhuni. Izinhlobo amathuluzi futhi izindlela zokuphepha uma usebenza naye
Sharovsky Castle: incazelo, umlando. Izikhangibavakashi Kharkiv esifundeni
Iphansi wokhuni idivayisi egumbini lokuphumula